We.com.mm - ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သင့်ချစ်သူကို ဒီအစားစာ (၅) မျိုးကျွေးကြည့်လိုက်ပါ
သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ၊ သင့်ချစ်သူကရော ဆေးလိပ်သောက်တတ်တဲ့သူလား…? ရှေ့မှာတော့ မသောက်ပါဘူးပြောပေမယ့် သင့်နောက်ကွယ်မှာခိုးပြီး သောက်နေပြီလား…?
ဆေးလိပ်ဆိုတာ စသောက်မိပြီးရင် ဖြတ်ဖို့ခက်ခဲသွားပါလိမ့်မယ်…။ ဆေးလိပ်မှာပါတဲ့ နီကိုတင်းဓာတ်တွေက ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ကို စွဲလမ်းစေတာကြောင့် ဆေးလိပ်ဖြတ်ရ ခက်ခဲနေတာပါ…။ ဒါပေမယ့် ဆေးလိပ်စွဲနေတဲ့ သင်ချစ်ရတဲ့သူတွေကို ဒီအစားစာ (၅) မျိုး ကျွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးလည်း ကောင်းစေပြီး ဆေးလိပ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေကိုသက်သာစေတဲ့အပြင် ထူးခြားမှုတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်…။
ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှာလည်း ဆေးလိပ်ကိုပြတ်စေတဲ့ ဓာတ်တွေများစွာပါဝင်နေပါတယ်…။ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဗီတာမင်စီဓာတ်တွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ကယ်လ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကလည်း သင့်အရိုးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်…။
ဆေးလိပ်မှာပါဝင်တဲ့ နီကိုတင်းဓာတ်တွေက ညဘက်မှာအမြင်အာရုံတွေကို လျော့နည်းလာစေပြီး အမြင်တွေဝေဝါးမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့် မုန်လာဥနီမှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်အေဓာတ်က မျက်လုံးအမြင်အာရုံကို ကောင်းစေနိုင်တဲ့အတွက် နီကိုတင်းကြောင့် မျက်စိအာရုံလျော့နည်းမှုကို သက်သာစေပါတယ်…။
Duke Universary က လေ့လာစမ်းသပ်ချက်တွေအရ ဆေးလိပ်မသောက်ခင်မှာ နွားနို့ကိုသောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးလိပ်သောက်ချင်စိတ်ဖြစ်စေမှုကို လျော့နည်းသွားစေပါတယ်…။ ဒါ့အပြင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ အရိုးတွေအားနည်းနေပြီဆိုရင်လည်း နွားနို့မှာပါဝင်တဲ့ ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်တွေနဲ့ ဗီတာမင်ဒီဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတာကြောင့် သင့်အရိုးကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်…။
လိမ္မော်သီးမှာလည်း ဗီတာမင်စီဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေတာကြောင့် သင့်ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်ခြင်းတွေကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်…။ ဒါကြောင့်ဆေးလိပ်သောက်တဲ့ သူတွေက ရောဂါကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ လိမ္မော်သီးကို စားပေးသင့်ပါတယ်နော်…။
ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ ဘဝမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ရေသောက်ဖို့ကအဓိကပါပဲ…။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါမှာ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတာကြောင့် ရေများများ သောက်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုတွေကိုလည်း သက်သာသွားစေပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ဆေးလိပ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်…။
Boat Noodle ဆိုင်ကိုသွားစရာမလိုပဲ အိမ်မှာပဲ လုပ်စားကြရအောင်